Ahoana ny Fomba Nentinao Nanamarika Ny Andro Iraisam-pirenena Ho An’ireo Mpifindra Monina? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Desambra 2015 15:24 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, বাংলা, русский, English
Mpifindra monina eo ambonin'ny “la Bestia”. Isan-taona, an'aliny ireo olona miampita an'i Meksika anatin'ny fanantenana hahazo an'i Etazonia, ny 90 isanjaton'ireto farany dia avy ao Amerika Afovoany. Sary nalaina avy ao amin'ny kaonty Flickr-n'i Peter Haden teo ambanin'ny Lisansa Creative Commons (CC BY 2.0)
Ny 18 Desambra dia andro natao hahatsiarovana ireo mpitsoa-ponenana s'ireo mpifindra monina, na avy any Siria izany, na Inde, na Shina, na Amerika Latina, eny fa na aiza na aiza eran-tany.
Amin'ity taona ity, koa satria ampoizina fa hahatratra taha avo dia avy ny isan'ireo olona eran-tany mikatsaka toerana hialofana, dia manao antso amin'ny vondrom-piarahamonina iraisam-pirenena ny Fikambanana Iraisam-pirenena Misahana ny Fifindra-monina (IOM):
mba hivondrona ka hahatsiaro ireo mpitsoa-ponenana sy mpifindra monina namoy ny ainy na tsy hita popoka raha niezaka hahatratra toeram-pialofana azo antoka taorian'ireo dia sarotra namakivakiana ranomasina sy efitra maro.
Maro ireo vahoaka any Etazonia no mahatakatra izany, na eo aza ireo adihevitra s'ireo toerana mahery fihetsika nisongadina nandritra ny hazakazaky ny mpirotsaka hofidiana avy ao amin'ny Antoko Repoblikana.Vahoaka maro avy ao amin'ny Faritry ny helo-dranomasin'i San Francisco, ohatra, no mbola mitady ny rariny sy miady ho an'ny fandraisana tsara kokoa an'ireo mpitsoa-ponenana s'ireo mpifindra monina.
Saingy ankoatra ireo marika mipetaka s'ireo toe-draharaha, dia olombelona ihany ny olona.
Maneho izany tsara mihitsy ny tenifototra #Iamamigrant.
Amin'izao Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Mpifindra monina izao, dia indro misy fampahatsiahivana fotsiny: Zanakà mpifindra monina avokoa isika rehetra.
Zarao ny tantaranao.
Amin'izao andro natokana ho an'ny Mpifindra monina izao, jereo ny https://t.co/N1WL8IUlc2 ho an'ireo vaovao farany avy amin'ny IOM.